88 New Generation Students: January 2012
EU keeps the pressure up on Burm
The EU earlier this month lifted visa bans on the Burmese president and vice president (Reuters)
European Union leaders on Monday urged Burma’s leaders to continue reforms and pledged to further ease sanctions if the regime meets the bloc’s expectations.
“I welcome the important changes taking place in Burma and encourage its government to maintain its determination to continue on the path of reform,” EU president Herman Van Rompuy said inastatement afterasummit in Brussels.
“These changes are opening up important new prospects for developing the relationship between the European Union and Burma.
“I look forward to further progress in the coming weeks, in particular the further release of political prisoners, free and fair elections, and halting ethnic conflicts.”
After nearly halfacentury of outright military rule in the country, the regime has surprised observers withaseries of reforms which culminated recently in democracy icon Aung San Suu Kyi standing foraseat in parliament.
The EU agreed in January to begin easing sanctions on Burma to encourage reform, lifting travel bans against the nation’s leaders and pledging further action pending continued change.
“We will continue to ease the EU’s restrictive measures if our expectations are met,” Van Rompuy said.
Separately British Prime Minister David Cameron said it was possible he could visit Burma, followingaseries of visits by senior western officials including US Secretary of State Hillary Clinton.
Cameron said he would “keep all options open” when asked if would visit the country, but said that Aung San Suu Kyi was on an “extremely busy schedule with these elections and everything else coming up.”
“But we’re going to watch very closely and do anything we can to help frankly,” he said.
Posted by ngs at 12:05
Peace Efforts Persist, ButaNationwide Ceasefire Remains Elusive
By WAI MOE Monday, January 30, 2012
In the month of January, the Burmese government successfully concluded some form of ceasefire agreement with the Shan State Army-North (SSA-North) and the Karen National Union (KNU), but was unable to do so with the Kachin Independence Army (KIA) and New Mon State Party (NMSP).
On Tuesday and Wednesday,adelegation from the NMSP and the government’s peace building committee will meet for “peace talks” in Moulmein, the capital of Mon State and the headquarters of the Burmese army’s Southeast Regional Military Command, according to Nai Hang Tha, the general secretary of the Mon armed group.
“Nai Rot Sa, the vice chairman of the NMSP, is leading the Mon delegation to Moulmein, and the government delegation will be led by Railway Minister U Aung Min,” Nai Hang Tha told The Irrawaddy on Monday.
“Within the policy of the UNFC (the United Nationalities Federal Council, an alliance of ethnic groups), the Mon delegation will raise the issue ofaceasefire across the country,” said Nai Hang Tha.
“I do not think there will be any signing ceremony in Moulmein since the meeting is the beginning of the process,” he said.
Although the NMSP is small compared to other ethnic armed groups, it is politically significant and has maintained its policy of demandinganationwide ceasefire. This position particularly supports the Kachin Independence Organization, which has been engaged in armed conflict with government forces since June 2011.
The SSA-North and its political wing, the Shan State Progressive Party, also held recent talks with the peace building committe, meeting with the team led by Aung Thaung and Thein Zaw in Thaunggyi, Shan State on Saturday.
At the meeting, the SSA-North officials raised the issue ofanationwide ceasefire as well, saying that the government should not enter into ceasefires with some groups and offend others.
After the meeting, however, the SSA-North reportedly signed an agreement with the government negotiators.
According to the state-run-newspaper The New Light of Myanmar, the government and the SSA-North signedafive-point ceasefire agreement on Monday.
The agreement reportedly allows the SSA-North to maintainabase in the Wanhai area of Shan State and to have temporary bases in other locations. It also provides for the opening of liaison offices in Thaungyi, Lashio and Kholan.
Despite the requests of their fellow ethnic armed groups foranationwide ceasefire, fighting continues in Kachin State between government forces and the KIA.
“Government troops still attack our troops, particularly in the northern Shan State area,” said Awng Jet,aKIA officer in Laiza.
“There wasapublic assembly in Laiza, where Kachin Independence Organization (KIO) officials explained what is happening in talks with the government delegation,” he said.
A delegation from the KIO, which is the political wing of the KIA, met with the government peace delegation led by Aung Thaung in China’s border town of Ruili on Jan.18-19.
The meeting did not result inaceasefire agreement, however, and the government troops even attacked KIA bases during the talks.
Aung Thaung told the KIO delegation that the peace process could take three years.
“But the talks between the KIO and the government will continue, probably in the second week of February,” said Awng Jet.
The other major ceasefire agreement signed by Naypyidaw in January was with Burma’s longest-operating insurgent group, the Karen National Union (KNU).
The ceasefire with the KNU was signed on Jan.12 in Hpa-an, the capital of Karen State, byagovernment delegation led by Aung Min.
During its talks with the government, the KNU delegation proposed an 11-point agreement that included issues such as the halting of human rights violations and forced labor.
As part of the ceasefire agreement that was signed, the government negotiator agreed to include the 11 points as part of future discussions.
After signing the ceasefire, both the government and the KNU will reposition their troops. The KNU heldacentral committee meeting on Jan.23-25 to discuss the repositioning of troops and the next round of talks with Naypyidaw.
“For building trust in the interest ofaceasefire, dialogue and discussion will be undertaken on the matter of reduction/pulling out and positioning of Burmese government troops in the KNU areas,” the KNU announced inastatement on the day following the central committee meeting.
David Takapaw, the vice chairman of the KNU, said the repositioning of troops would be difficult for the government army since more than 200 government outposts are in KNU areas, but he said he “hopes for the best.”
“The ceasefire agreement isagood step, but it is alsoasmall step in the whole picture of the peace process in Burma,” said Takapaw.
Posted by ngs at 11:49
Burmese Army Stands Behind President
By YAN PAING / THE IRRAWADDY Friday, January 27, 2012
Burmese military parade during the 65th Anniversary of Armed Forces Day in Naypyidaw. (Photo: AP)
Burmese President Thein Sein’s recent political reform efforts have garnered continuous support within the army, according to military sources.
Many army officers and other rank-and-file soldiers are reportedly in favor of Thein Sein’s administration regarding its meeting with pro-democracy leader Aung San Suu Kyi, peace talks with different ethnic armed groups and the release ofalarge number of political prisoners.
Many believe that the actions of the new president—who used to follow the direct orders of previous junta chief Snr-Gen Than Shwe—have been improving the image of the army, according toahigh-ranking official in Naypyidaw Military Command.
Relations are fine between Thein Sein and Gen Min Aung Hlaing, the commander-in-chief of armed forces, despiteaslight rift previously developing between the pair, the official told The Irrawaddy.
“They have good relations. Sometimes the president tried to stop the commander-in-chief when he thought the latter wanted to do anything that came into his mind, that’s all,” said the official.
During his goodwill visit to Thailand earlier this month, Min Aung Hlaing said the Burmese armed forces have no desire to turn backwards while the country is marching towardsademocratic future.
In her recent interview with the Washington Post, Suu Kyi emphasized that the army has much more power than necessary.
“Our present constitution gives the military far too much power,” said the Nobel Laureate. “Although the president is the head of state, he is not necessarily the highest power in the land. The commander-in-chief can take over all powers of government at any time he feels it to be necessary.
“I don’t know how much support [Thein Sein] has within the army. He himself is an army man, so I assume there must be considerable support for him in military circles. But that is just an assumption.”
The army under Min Aung Hlaing’s command, however, ignored the president’s order to stop its current offensive against the Kachin Independence Army in northern Kachin State. Critics believe that hardliners in both the military and government have resisted some of the Thein Sein's reforms.
Another senior officer based in an infantry unit in Shan State, who asked to remain anonymous, told The Irrawaddy that the commander-in-chief has been consolidating power by transferring or dismissing high-ranking personnel who were previously appointed by Than Shwe and his deputy Vice-Snr-Gen Maung Aye.
“He asked many colonels in army regional commands such as in Lashio, Shan and Arakan states either to move somewhere else or resign if they don’t want the transfer, so many have chosen the second option,” said the senior officer.
He added that Min Aung Hlaing recently transferred some senior officers, who were earmarked for regional and divisional commander posts before Than Shwe retired, to unimportant positions within the army.
Thein Sein wasagraduate of the Defense Services Academy (DSA) Intake9and served as Colonel General Staff at the office of the commander-in-chief. He later became the head of the Military Operation Command No.4based in Rangoon. In 1997, he served as the commander of Triangle Region Command. He also took the position of the Adjust General within the army.
Gen Min Aung Hlaing was much junior in military rank compared to the president and graduated from DSA Intake 19. In 2001, he served as the commander of Division 44 based in Mon State. He later became the headmaster of Pyin Oo Lwin Military University.
Min Aung Hlaing also took other positions such as head of the Western Command, Triangle Region Command, Bureau of Special Operations and Coordinator of Special Operations (Army, Navy and Airforce).
Posted by Thinzar at 11:42
A number of Burma's political prisoners who were recently released told The Irrawaddy that conditions inside the prisons were deplorable until 1999 when the International Committee of the Red Cross (ICRC) became involved. Many, however, expressed dissatisfaction with the physical environment and said that conditions varied in prisons across the country.
The Irrawaddy reporter Lin Thant spoke to Ko Ko Gyi, the well-known 88 Generation Students Group leader about conditions and his personal experiences inside Mong Hsat Prison, which is situated inaremote location in eastern Shan State.
Ko Ko Gyi was arrested together with his colleagues in 2007 after his involvement in peaceful protests. For his role in the demonstrations, he was handeda65 andahalf year prison sentence.
Having spent nearly 20 years inside, and having done time in Insein, Maubin, Keng Tong and Mong Hsat prisons, Ko Ko Gyi is well qualified to talk about Burma's prison system.
He was released on Jan. 13 underapresidential amnesty.
Question: Based on your personal experience, please tell us the conditions in the different prisons you were detained.
Answer: The prison conditions were quite bad when we were imprisoned for the first time. What I mean is that we were beaten and maltreated and regularly sent to the guard dogs' cells. We were not allowed to read and anyone caught withapiece of paper was givenasevere punishment.
However, after the ICRC’s visits to prisons, conditions began to change gradually. For instance, I had to sleep onacold concrete floor for about nine years until the Red Cross came to inspect the jail. After their visit I was allocatedabed. Also, toilets that had manual flushing were installed, and we were permitted to read books, newspapers and journals.
Q: Were there any situations that did not improve?
A: A political prisoner could previously receivearemission on his or her sentence like other inmates. However, after the changes took place in 1997, he no longer qualified foraremission of his sentence. It wasavery bad practice. In prison, we can generally calculate that we have the right to getapardon on one-third of our sentence in accordance with the jail manual. It means that ifapolitical prisoner was givena15-year term he should be released after serving 10 years. The issue causedarift between the political prisoners and the prison authorities. On one hand, the government said there are no prisoners in Burma, but on the other hand our rights were systematically abused. That was the worst thing.
Another issue was that during our second time of imprisonment we were sent to remote prisons, intentionally creatingasituation where our families could not contact or visit us regularly. A fortnightly prison visit creates an outlet for frustration forapolitical prisoner. By having an opportunity to meet and talk with family membersapolitical prisoner can release his/her stress that has been bottled up for the past 14 days.
For example, I was in Mong Hsat prison for over three years, during which time my family visited me only three times. And I would say that I wasabit luckier than many others. There were those whose families could not even afford to come and see them even one time.
So, whether intentional or not, transferring political prisoners to remote prisons wasamental torture for them. While physical conditions in different prisons were improving, psychological torture continued.
Q: How about health care in prison?
A: Even an ordinary citizen has to pay everything for health care under the motto za-yeik-hmya-pay-kyan-mar-yay [Share expenses for health]. But it is worse foraprisoner. Especially in small towns in remote areas, local residents don’t receive adequate health care. For instance, there is neither an X-ray machine nor an eye-doctor noradentist.
Posted by Thinzar at 13:28
Posted by ngs at 10:33
We, 88 New Generation Students (UK) , would like to kindly invite you all to support and participate in the protest, calling on the Thein Sein government to release of all the remaining political prisoners in Burma.
We do not deny that the Burmese government took onanew political shape from dictatorship to quasi-civil government after having unilateral, illegitimate election in 2010 . In an effort to save off pressure and criticism from the international community, the new Burmese government’s January 2012 amnesty, saw the largest number of political prisoners release since 2004 . This fortunately included our prominent student leaders, monk leaders and ethnic leaders.
Of course,we welcome this asafirst positive sign towards democratization. However, by just merely witnessing these initial gestures made by the Burmese government, their original intention to get sanctions lifted and gain international legitimacy should not be forgotten. There should be more actions taken by the Thein Sein government to move on to significant, substantial and long-lasting political changes in our country in line with the democratic system practised by the every democratic nation. To be able to implement this, the most fundamental step, is the release of all the remaining political prisoners by the Thein Sein government and withadeclaration promising to the people of Burma and the international community, that there will be no such political prisoners in Burma in the future.
In addition, despite the initial steps undertaken by the Thein Sein government, there is still ongoing persist tensions and suppression of any forms in all the ethnic areas especially in the northern and eastern Burma. Asaresult, this createsafar distant hope for the ethnic nationalities for returning home safe and in peace which has already vanished over many decades.
So we are going to holdaprotest to strongly urge the Thein Sein government:
(1) To unconditionally release all the remaining political prisoners in Burma
(2) To declareanationwide ceasefire and solve the ethnic issues, withapeaceful, inclusive political dialogue
(3) To start working on national reconciliation
Date: 26th January 2012 (Thursday)
To show our solidarity, we would respectfully like to ask all organizations and individuals who are working hard for the freedom of all political prisoners and democracy in our country to join hand in hand. Your continued support and cooperation is essential to bring freedom, justice, human rights and democracy in Burma.
Posted by ngs at 07:36
Wednesday, 25 January 2012 20:51 Mizzima News
(Mizzima) – Burma Campaign UK (BCUK) said it has confirmed reports thatapregnant Kachin woman was shot and killed by Burmese Army soldiers on January 11.
A statement released on Wednesday said Mangshang Ying Wang was shot by Burmese Army soldiers on January 11 at9a.m. on Hpakan Road in Kachin State. It is believed that soldiers from Battalion 58 under the command of Lieutenant Ye Min Twi, Lieutenant Ko Ko Latt and Colonel Htun Naing were in charge of soldiers in that area, according to the BCUK statement. It did not citeasource for its information.
Mangshang Ying Wang was four months pregnant, the BCUK said, and she was taken toahospital where she died later that day. Another woman, Gawlu Seng Hkawn, was also shot and injured in the attack, it said.
In June 2010, the Burmese government brokeacease-fire with the Kachin Independence Organization, an armed political party in Kachin State in northeast Burma.
The Burmese Army has been deliberately targeting civilians since resuming the fighting, said BCUK. “The attacks by the Burmese Army have forced up to 50,000 people to flee their homes. The military-backed government continues to block international aid from reaching these people,” it said inapress statement.
“The soldiers who carried out the attack should be arrested and put on trial”, said Zoya Phan, campaigns manager at Burma Campaign UK. “There has been good news from Burma recently, but there is still more bad news than good news. It is time the international community tookamore balanced approach to what is really happening in Burma.
“For decades these kind of attacks have taken place with no action taken against the soldiers and their commanders. The scale of this indicates this is Army policy, not individual soldiers behaving badly.”
She said the breaking of the cease-fire in Kachin State was expected, but the international community took no action to try to prevent it happening, and no action to ensure aid could reach those who fled the attacks.
“Attacks like this should remind the EU that they shouldn’t get carried away by the good news and relax sanctions too soon,” she said. “Those EU members whose diplomats are privately arguing that even the arms embargo should be lifted in April, should come out publicly and explain why they think it’sagood idea to sell arms toagovernment that shoots unarmed women.”
Posted by ngs at 06:50
Min Ko Naing Calls for Rule of Law
By THE IRRAWADDY Tuesday, January 24, 2012
Speaking ataceremony held in their honor, two recently released leaders of the 88 Generation Students group told their supporters in Pegu on Tuesday that they welcome recent political changes in Burma, but hope for more far-reaching reforms in the future.
Echoing National League for Democracy (NLD) leader Aung San Suu Kyi's oft-repeated refrain, former student activist Min Ko Naing—widely regarded as second only to Suu Kyi in terms of his political influence in Burma's pro-democracy movement—emphasized the need forareturn to rule of law in the country after halfacentury of military rule.
“Without the rule of law, there is no security. Citizens can be arrested at any time, and they never know when there will beaknock on their door in the middle of the night,” he said, speaking at an event in Pegu that was also attended by his long-time colleague, Ko Ko Gyi.
The two leaders, who were among hundreds of political prisoners freed underapresidential order on Jan. 13, also applauded the cooperation they have received from local authorities since their release.
Citing their press conference in Rangoon last weekend, which they held with permission from Rangoon Division authorities, they said they are now ready to cooperate with any level of government to achieve further progress.
Speaking to The Irrawaddy on Tuesday, Ko Ko Gyi said the fact that plainclothes Special Branch officers and local traffic police facilitated their trip to Pegu, about 80 km northeast of Rangoon, was another sign of the more cooperative relationship that is possible between dissidents and the authorities.
The trip to Pegu—their first outside of Rangoon Division since their release from prison less than two weeks ago—was made at the invitation of local supporters and political groups, including the NLD and the All Burma Federation of Student Unions, an officially outlawed group that reformed in 2007 at the height of the Buddhist monk-led Saffron Revolution.
“You are our witnesses when we say that we are willing to work with the authorities without hesitation,” Ko Ko Gyi told an audience of about 500 people on Tuesday, adding that he hoped to see more “meaningful change” in the months ahead.
Referring to his recent status asapolitical prisoner, he said: “We don't want to be prisoners of the past or prisoners of doubt. We want to look forward toabeautiful future.”
However, inagrim reminder of the dark shadow that abuses of power continue to cast over the country, the two returned to Rangoon immediately after the ceremony in Pegu to attend the funeral of another former political prisoner who died on Sunday.
Thet Nwe, 54, was also among the prisoners released on Jan. 13. Relatives say he died nine days later of complications fromamedical condition that went untreated while he was in prison, where he was servingalife sentence for high treason. His health problems were believed to stem from torture he received while under interrogation.
After the funeral,agroup of 88 Generation leaders were expected to meet with Suu Kyi at her home in Rangoon. It will be the first time in more than 20 years that Suu Kyi and the former student activists who spearheaded Burma's 1988 pro-democracy uprising have been able to meet.
Posted by ngs at 04:55
‘Reforms’ in Burma Offer Little Hope to Refugees
By SAW YAN NAING / THE IRRAWADDY Tuesday, January 24, 2012
Refugees at the Mae La camp on the Thai-Burmese border. (Photo: Moe Kyaw / The Irrawaddy)
MAE HONG SON, Thailand — Burma has showcasedaseries of “reforms” to the international community, but homecoming remainsadistant dream for the thousands of war refugees living in neighbouring Thailand.
“Progress can be seen only in big cities, not in our hometown,” says 61-year-old Saw Raw, sitting on the balcony of his house at the Mae La Oon refugee camp in Mae Sariang District in northern Thailand. It’sacold winter morning and the native of Karen State in eastern Burma is listening to his Chinese-made radio tuned to Washington, D.C.-based Radio Free Asia in Burmese, his one and only source of news from his home country.
“I think the day is still far away when we will get to go back home,” Saw Raw adds, shaking his head in the hopelessness that characterizes the mood among the over 40,000 refugees that have called this isolated camp home for more than three decades. Raw fled his hometown in the early 1980s after the Burma army launchedamilitary offensive that destroyed his village. What he thought at the time would bea“temporary” shelter remains his “home” nearly three decades later.
Raw is one of the roughly 140,000 Burmese refugees living in nine camps on Thai-Burmese border since 1984. Armed ethnic minority groups, like the Karen National Union (KNU), have been fighting for autonomy since 1948, but the government remains unwilling to discuss devolution.
Htun Htun, chairman of the Mae La refugee camp, agrees that the recent signs of change in Burma are limited to the country's urban areas, in the region that was known as Burma Proper during the era of British colonial rule and was administered separately without including the ethnic states.
“I think refugee repatriation is still far away,” he says. “It will be possible only when peace and stability prevail in the ethnic homelands.”
Despite persistent tensions in Burma’s ethnic states, Thailand has repeatedly voiced its intention to repatriate the refugees. These calls intensified whenanew Burmese government led by President Thein Sein, an ex-military general, was sworn in last year.
Sally Thompson, the deputy director of the Thailand Burma Border Consortium, says that refugees are eager to return home but the armed conflicts in Burma, especially in Kachin State, are growing despite the recent reforms. There are about 500,000 internally displaced ethnic civilians in the east, north and south of Burma due to armed conflicts, she points out.
“We always hope that the refugees are able to return home sometime,” Thompson says. She added, however, that she can’t predict when this will be possible.
About 70,000 Burmese refugees have been resettled in third countries, but many have not opted for that in hope of returning home, says Thompson.
The 54-year-old Paw Mu Nan,arefugee woman and the secretary of the Mae La Oon camp who left Burma 25 years ago, said, “Of course, we will return home if there is peace.”
“If there were no Burmese troops in their hometowns, many people would have returned home,” Nan says. She fled Karen State after the military seizedanumbers of Karen rebel bases and occupied civilian villages including Nan’s village Pan Het in Papun District between 1984 and 1997.
Religious faith is strong among many ethnic Karen. Every Sunday, they pray at their churches for the realization of their dream of returning home. On Jan. 12, many Christian Karen people across the world—in countries as far flung as Japan, Thailand, the United States, England and other EU countries—held prayers for peace in Karen State while the leaders of the KNU held peace talk with the government.
The result of those talks was an 11-point ceasefire agreement reached on the same day. Under the deal, the KNU is allowed to open liaison offices, and the government undertakes to end forced labor, arbitrary taxation and extortion. Despite the agreement, however, the war refugees are still uncertain when they will haveachance to safely return home. While some express optimism, few believe that it will be possible to return home in the near future.
Meanwhile, the relative calm in Karen State contrasts starkly with the deadly war that has been waged in Kachin State since last June, when the government endedatruce that had lasted 17 years. La Nan, the spokesperson for the Kachin Independence Organization, the 10,000-strong armed group that is battling Burmese army forces, says the government has been using helicopters not only to carry out injured soldiers, but also to send ammunition and troops to the combat zone since Nov. 25.
Local sources say the war in Kachin State has already displaced more than 45,000 Kachin civilians, and it's impossible to say when they will be able to return to their homes.
“The civil war will go on foralong time if the government doesn’t make real peace with ethnic minorities,” warns La Nan.
Last November, Physicians for Human Rights conducted an investigation into allegations of rights abuses and atrocities by the Burmese military in Kachin State and found that between June and September 2011, the army looted food from civilians, fired indiscriminately at villagers, threatened them with attacks, and forcibly used them as porters and minesweepers.
According to the Thailand-based Kachin News Group, on Nov. 30—the same day that US Secretary of State Hillary Clinton arrived in Burma foralandmark visit—government troops killed civilians and burned their houses in Kachin State.
Ashley South,aBurma watcher, says that the international community should encourage reforms by the government of President Thein Sein, but serious and widespread human rights abuses, particularly in areas affected by on-going armed conflicts, must not be ignored. Without addressing the aspirations and grievances of ethnic minorities, social and political problems cannot be solved, South adds.
Meanwhile, refugees living in Thailand and elsewhere continue to pray for the day when they can return to their homeland, but also doubt that they will see that day anytime soon.
Maw Lu,a28-year-old refugee who has spent most of his life inarefugee camp, says he doesn't want to be foolhardy and attempt to return too soon. Going toathird country isabetter option, he says, not only for himself but also for the “following generations”. Yet he still hopes to see the land of his ancestors again someday, when and if peace arrives. “But I might be an old man by then,” he says, laughing.
Posted by ngs at 01:21
ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ပေါ်ထွန်းရေး ကြိုးပမ်းသွားမည်ဟုဆို
By featured, ဧရာဝတီ on January 23, 2012 12:31 pm
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ ပေါ်ထွန်းရေးအတွက် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သူ မင်းကိုနိုင်က ပြောသည်။
ဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင့်သုံးသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ် အသွင်ပြောင်းမည်ဆိုပါက ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ ဖွဲ့စည်းခွင့် ပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျောင်းသား သမဂ္ဂများသည် ကျောင်းသားလွှတ်တော်များပင်ဖြစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီ စနစ်အတွက် အလေ့အကျင့်ကောင်း ပေးသော နေရာများဖြစ်ကြောင်း၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ပေါ်ထွန်းရေးအတွက် အညံ့ခံမည်မဟုတ်ကြောင်း ဇန်န၀ါရီလ ၂၁ ရက်နေ့ ရန်ကုန် တော်ဝင်စင်တာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် မင်းကိုနိုင်က ဆိုသည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များအား သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
“ကျောင်းသားသမဂ္ဂဆိုတာ ကျောင်းသားလွှတ်တော်ပဲ။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ သွားမယ်ဆိုရင် လွှတ်တော်ရှိရမယ်။ လွှတ်တော် ရှိရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောင်းသားတွေအတွက် လေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေ ရှိကိုရှိရမယ်။ဒီမိုကရေစီ တကယ်သွားတယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးတွေနဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းဖို့ ခွင့်ကို ခွင့်ပြုရမယ်။ သမိုင်း အဆက်ဆက်မှာ အစဉ်အလာကြီးခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂကို ကျနော်တို့ခေတ်မှာလည်း အညံ့မခံခဲ့ဘူး။ ဟောဒီခေတ်မှာ၊ နောင်မျိုးဆက်တွေမှာလည်း အညံ့မခံဘူးဆိုတာ ကျနော်ယုံပါတယ်” ဟု ကိုမင်းကိုနိုင်က ပြောသည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ကိုမင်းဇေယျကလည်း ကျောင်းသားများသည် ခေတ်အဆက်ဆက် လွတ်လပ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင် ဦးဆောင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားဆိုသော ခေါင်းစဉ် အောက်တွင် အားလုံး တပြေးညီတူညီကြောင်း ပြောဆိုသည်။
“ကျောင်းသားရှိရင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ရှိရမယ်။ ၁၉၂၀ က ကျောင်းသား၊ ၁၉၈၈ က ကျောင်းသား၊ အခုကျောင်းသား အားလုံး အတူတူပဲ။ ခေတ်အဆက်ဆက် ကျောင်းသားတွေက ဦးဆောင်ခဲ့ကြတယ်” ဟု ၎င်းက ရှင်းလင်းသည်။
ဒီမိုကရေစီ အစိုးရဆိုလျှင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုကြောက်ရွံ့ရန် မလိုကြောင်း၊ အစိုးရ၏ ပြည်သူ့အပေါ် ထားရှိသော သဘောထားနှင့် အုပ်ချုပ်ပုံအပေါ် မူတည်ပြီး ကျောင်းသားသမဂ္ဂများက ပြန်လည်တုံ့ပြန်မည် ဖြစ်ကြောင်း မင်းကိုနိုင်က
“ကျောင်းသား သမဂ္ဂကို မကြောက်ပါနဲ့။ မှန်ကန်တဲ့အစိုးရ၊ မှန်ကန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုရင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂက တွန်မယ့်ဒေါင်း၊ ကမယ့် ဒေါင်းပါ။ အဲဒီကျောင်းသားသမဂ္ဂက ဖောက်ပြန်တဲ့စနစ်၊ အခွင့်ထူးခံတွေနဲ့ ခွပ်မယ့်ဒေါင်းပါ။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့က ခွပ်ဒေါင်းအလံလည်း ရှိတယ်၊ ကဒေါင်းလည်းအလံလည်း ရှိတယ်။ သင့်တော်ရာ တီးလုံးနဲ့ သင့်တော်သလို ကျနော်တို့ အလံကို တင်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ က ဒေါင်း အလံပဲ တင်ချင်ပါတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ၏ အချက် ၉ ချက်ပါ သဘောထားကြေညာချက် တရပ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဆုံးဖြတ်ကို ကြိုဆိုထောက်ခံကာ
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများက ၀န်းရန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် အင်အားစုများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျန်ရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံး ပြန်လွှတ်ပေးရန်၊ ပြည်ပရောက် နိုင်ငံရေး အင်အားစုများ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ပြန်လာနိုင်ရေးအတွက် အစိုးရက ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးအတွက် အားလုံးနှင့် လက်တွဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားမည် ဆိုသော သဘောထားများကို တရားဝင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယနေ့အချိန်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကမ္ဘာသိ ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်သည့်အတွက် ၈၈ မျိုးဆက်
ကျောင်းသားများ အနေနှင့် မဖြစ်မနေ အားဖြည့် သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၈၈ မျိုးဆက်များ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အင်အားစုများ အားလုံး စုပေါင်းပါက လိုချင်သော ပန်းတိုင် မြန်မြန်ရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုမင်းကိုနိုင်က ရှင်းပြသည်။
“ကမ္ဘာကြီးတခုလုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားရေးအတွက် ပုံရိပ်တခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီးသားပါ။ ဒါငြင်းလို့မရပါဘူး။ အဲဒီ အရေးကြီးတဲ့ပုံရိပ်က လူထုထောက်ခံမှု ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ဆိုတဲ့ ပေတံနဲ့ ထပ်တိုင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာက စောင့်ကြည့်နေတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် တယောက်ကို ထောက်ခံမှု အင်အား ဘယ်လောက်များတယ် ဆိုတာကို အားဖြည့်ပေးဖို့ ကျနော်တို့မှာ ဟောဒီအချိုး၊ ဟောဒီအကွေ့မှာဖြင့် တာဝန်ရှိတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့အလုပ်တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီးတော့ လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ အားဖြည့်ပေးသွားပါမယ်။ ၈၈ နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အားအကုန် ပေါင်းမယ် ဆိုရင်၊ ကျန်တဲ့ အင်အားစုတွေပါ အားလုံးအတူတကွ လိုက်လာမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ရောက်ချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ပိုမြန်မြန် ရောက်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်” ဟု မင်းကိုနိုင်က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသော စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုများနှင့်ပတ်သက်သော သဘောထားများကို သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တွင် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများက ထုတ်ဖော်သွားသည်။
ကိုမင်းကိုနိုင်က “ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုဆိုတာ သူ့အလိုလို မိုးပေါ်က ကျလာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းကြောင့် အကျိုး ဖြစ်လာတာပါ။ ဒါကြောင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဆိုတဲ့ အကျိုးတရားကို ဖယ်ရှားချင်ရင် အကြောင်းတရားကို မသိချင်အောင် မဆောင်ပါနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အကြောင်းတရားကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့အားလုံး ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို နိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ် အသုံးပြုမှုအား လုံးဝလက်မခံကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သူ ကိုကိုကြီးက ပြောသည်။
“မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ ၂၆ နှစ်စလုံးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် Sanctions လုပ်တာ ကျတို့ ခံခဲ့ရပြီးပါပြီ။ အခုမှ ကျနော်တို့ ဒီ Sanctions ကိစ္စက အင်မတန်ကို ရေပန်းစားနေတဲ့ စကားလုံးဖြစ်နေပေမယ်လို့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံကိုယ်နှိုက်က၊ ကျနော်တို့ အစိုးရ ကိုယ်နှိုက်က Sanctions လုပ်တာကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျနော်တို့ ခံစားခဲ့ရပြီးပါပြီ။ နောက် အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျနော်တို့ ပွင့်လင်းလာတယ်၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ လုပ်လာတာကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဈေးအကြီးဆုံး တယ်လီဖုန်း၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဈေးအကြီးဆုံး မော်တော်ကားတွေ ရှိအောင် ဥရောပ သမဂ္ဂက Sanctions လုပ်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အမေရိကန်အစိုးရက Sanctions လုပ်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ Sanctions ကိစ္စကို ပြောရင် ကျနော်တို့ကပဲ လူထုတွေ ဆင်းရဲနွမ်းပါးအောင်၊ နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံတွေက Sanctions လုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ ဒီဟာကို လက်နက်တခု အဖြစ်နဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ထိုးနှက်ဖို့ အသုံးချနေတာဆိုရင် လက်မခံပါဘူး” ဟု ကိုကိုကြီးက ရှင်းပြသည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများသည် ပြည်သူများ နစ်နာမည့်ကိစ္စကို ပြုလုပ်မဟုတ်ကြောင်း၊မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ဖယ်ရှားရေးအတွက် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများက ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့က
“ကျနော့်တကိုယ်စာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်ရင် ကျနော်ထောင်ထဲ သွား မနေဘူး၊ ဒီနိုင်ငံရေးထဲ လာမလုပ်ဘူး။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ကိုယ်နှိုက်က ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ချင်လို့၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီး တိုးတက်ချင်လို့ နိုင်ငံရေး လုပ်တာပါ။ အဲဒီတော့ ပြည်သူကို နစ်နာမယ့် ကိစ္စမျိုးဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူး။ ဟိုတုန်းကလည်း မလုပ်ဘူး၊ နောက်လည်း မလုပ်ဘူး။ အဲဒီတော့ ကောင်းပြီ Sanctions ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ခုနက မင်းကိုနိုင် ပြောထားပြီးပါပြီ။ ဘာကြောင့် လုပ်ထားတာလဲ။ Sanctions လုပ်တဲ့ ကာယကံရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ အခု ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီပဲ။ ဆွေးနွေးနေပြီပဲ။ အဲဒီတော့ Sanctions ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ဖြေရှင်းရင် Sanctions က သူ့ဟာသူ ပြေလည်သွားမှာပါ။ တောင်းဆိုနေစရာ မလိုပါဘူး။ အဲဒီတော့ Sanctions လုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို ကျနော်တို့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဖြေရှင်းမယ်။ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဆောင်ရွက်မယ်။ အဲဒါက Sanctions နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သဘောထားပါ” ဟု ကိုကိုကြီးက သတင်းထောက်တဦး၏ မေးမြန်းချက်ကို ပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများက ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့် အပေါ်လည်း ထောက်ပြပြီး သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ရရှိစေရန် မီဒီယာများက ကြိုးပမ်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် အတွက် စာပေစိစစ်ရေး မရှိသင့်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
“ကျနော်တို့နဲ့အတူ အပြောင်းအလဲကို လိုက်ပါနိုင်ကြမယ်လို့ ရည်ရွယ်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ရတာလည်း အရေးကြီးတဲ့ အချက်တချက် အနေနဲ့ပါပါတယ်။ ထပ်ပြီးတော့ တိုးရပါလိမ့်မယ်။ စာပေစိစစ်ရေးဆိုတာ လိုအပ်ပါတယ်လို့ ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ ဒီလောက ထပ်တက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သဘောထားတွေ အယူအဆတွေအမျိုးမျိုး တင်ပြနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်မျိုးကို ဒီလောကသမားတွေ ခြေတလှမ်းတိုးကြဖို့၊ ထပ်ပြီးတော့ သတ္တိလေး မွေးပြီး ရေးကြ၊ ထည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ” ဟု မင်းကိုနိုင်က မီဒီယာများကို တိုက်တွန်းသည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီတရပ်အနေဖြင့် ထူထောင် လုပ်ဆောင်ရေးကို လတ်တလော မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးကြောင်း၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲလွန် ကာလရောက်မှသာ စဉ်းစားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“အချိန်ကာလ တခုရောက်ရင်တော့ စဉ်းစားမှာပါ။ တဦးချင်းအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ပါတီတွေဆီ သွားချင်တဲ့သူလည်း သွားလို့ရတယ်၊ တခြား လူမှုရေးနယ်ပယ် အကူအညီပေးရေးတွေမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ချင်လည်း လုပ်လို့ရပါတယ်” ဟု ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား တဦးဖြစ်သူ ကိုပြုံးချိုက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
တော်ဝင်စင်တာတွင် ကျင်းပခဲ့သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းမီဒီယာများ၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ သက်ဆိုင်ရာအရပ်ဝတ် ရဲနှင့် အာဏာပိုင်များ အပါအ၀င် စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၅၀၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
Posted by ngs at 00:56
“နိုင်ငံရေးအရ ယုံကြည်စိတ်ချမှုကို စိတ်အားထက်သန်စွာ မျှော်လင့်နေတယ်”
ကိုဝိုင်း | တနင်္လာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၃ နာရီ ၄၈ မိနစ်
(တိုင်းရင်းသားလူငယ် ကိုတင်ထူးအောင် နှင့် အင်တာဗျူး)
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ကိုတင်ထူးအောင်သည် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့၊ လူထုလှုပ်ရှားမှု ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီတို့တွင် တာဝန်ပေးအပ်ခံရကာ တိုင်းရင်းသား လူငယ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့၏ မူဝါဒနှင့် နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံ ဖြစ်သည်။
၂၀၀၇ ခု လောင်ဆာဆီနှင့် ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး၊ သံဃာများမေတ္တာပို့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတို့တွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့သဖြင့် ၂၀၀၇ ခု အောက်တိုဘာတွင် အာဏာပိုင်များ၏ ဖမ်းဆီးပြီး ထောင်ဒဏ် ၃၃ နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။
အယူခံဝင်ခဲ့သဖြင့် နှစ် ၂၀ သာ ကျန်ပြီး အင်းစိန်ထောင်နှင့် ခန္တီးထောင်တို့တွင် ၄ နှစ်ကျော် ကျခံပြီးနောက် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် ခန္တီးထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသည်။ ခန္တီးထောင်တွင် ၃ နှစ်ကျော် နေခဲ့ရသည်။
အသက် ၃၀ ကျော်အရွယ်ရှိ ကိုတင်ထူးအောင်၏ နိုင်ငံရေးဘဝဖြတ်သန်းမှုနှင့် သဘောထား၊ ထောင်တွင်း အတွေ့အကြုံတို့ကို သိရှိနိုင်ရန် မဇ္ဈိမ သတင်းထောက် ကိုဝိုင်းက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားသည်။
ကိုတင်ထူးအောင်ကို ပုဒ်မ ဘယ်နှခုလောက် အတပ်ခံရတာလဲ။
“ပုဒ်မ ၉ ခု အတပ်ခံရပါတယ်။ ၃၃-က တွေလည်း ပါတယ်။ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့နဲ့ တွဲထားတဲ့ ပုဒ်မတွေကိုတော့ ကျနော့်ကို အမိန့်ချခါနီးမှ ဆိုင်းငံ့လုပ်လိုက်ပါတယ်”
“ခန္တီးထောင်မှာ ကျန်နေခဲ့တဲ့ လူတွေထဲကတော့ နာဂလက်နက်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနေတဲ့ ကိုဒေးဗစ်ဆန်းရယ်၊ MI က ဗိုလ်မှူးချုပ်သန်းထွန်း၊ ဝ’ က မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ထောင်ဒဏ် တသက် ကျနေတဲ့ ဦးအိုက်စံ၊ ဦးခင်ညွန့်ရဲ့ ပီအေ ဦးနိုင်ဌေး၊ မုံးကိုး အထူးဒေသ-၁ လက်နက်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လဲထားတဲ့ ဒုဥက္ကဌ ဦးဇော်လရယ် ကျန်ပါသေးတယ်။ ဘူးသီင်္းတောင်ထောင်ထဲမှာ သူတို့ အဖွဲ့က ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမူဆာလ ဆုံးသွားပါပြီ”
ထွက်လာတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလို့ ပြောလို့ရတာ အတူတူ ဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲ။
“ကိုထင်ကျော်၊ ကိုနေဝင်းစိုး၊ ကိုကျော်မိုးဦး၊ ဘုန်းကြီး ဦးပါကတ၊ ကိုဖိုးတုတ်၊ ဖိုးကျော်၊ မထားထားသက်။ ကိုနေဝင်းစိုး က ဒေါက်တာနိုင်အောင်တို့ FDB နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီဘက်ကို ကူးလာတာမှာ ကျတဲ့သဘောပါ။ ကိုကျော်မိုးဦးက လှိုင်သာယာဘက်မှာ စက်ရုံတခုမှာ ဗုံးကို မြောင်းထဲမှာ ချထားတယ်ဆိုပြီးတော့ ဆွဲတာပါ။ ကိုဖိုးတုတ်က ယူဂျီပေါ့ labor နဲ့ပတ်သက်တာပါ။ ကိုဖိုးကျော် သူ့အဖေက NLD က မုံရွာ ဦးညီပု ဒေါင်းရုပ် ဆွဲတယ်ဆိုပြီးတော့ ချလိုက်တာပါ။ မထားထားသက်က အမေရိကန်စင်တာမှာ အလုပ်သမားကိစ္စပြောလို့ ဖမ်းခံရတဲ့ ကိုသူရိန်အောင် တို့အုပ်စု အဆက်စပ်ပါပဲ။ ယူဂျီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရင်းကျတာပါ။ ဦးပါကတ ကျတော့ ဟိုဘက်က ကိုမောင်မောင်ကြီး (NDD) တို့ သင်တန်းပေးပြီးတော့ ဒီဘက်ပြန်ဝင်လာတဲ့ အချိန်မှာ အဖမ်းခံရတာပါ”
အရင်တုန်းက ထောင်ကျဖူးသေးလား။ ၁၉၈၈ ခုမှာ ပါခဲ့သေးလား။ ပညာရေးအခြေအနေ။
“ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မှာ မပါပါဘူး။ ကျနော်တို့က ပထမ တကြိမ် စစ်ထွေထောင်မှာ ကျခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ အာဏာအလွဲသုံးစားမှုကို ကျနော်က စစ်ထွေတက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ် ဥပဒေကျောင်းသားအနေနဲ့ ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် စစ်ထွေထောင်မှာ ထောင် ၇ နှစ် ကျခံခဲ့ရပါတယ်။ တနှစ်ကျော်လောက်ပဲ နေခဲ့ရတယ်။ အဲဒီမှာ ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ သိကျွမ်းလာပြီးတော့ ၂၀၀၅ ခုမှာ အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးတွေရဲ့ မလျော်မကန် လုပ်ရပ်တွေကြောင့်ဆိုပြီး ကျနော်တို့ကို လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်တို့က ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာမှ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်း သားများဆိုပြီး ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုက ၁၀ (က) နဲ့ နှစ်စေ့လို့ လွှတ်ပေးလိုက်တာပါ”
“ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ တိုင်းမှူး အဓိကပါ။ တိုင်းမှူးထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဥပဒေကို ကျနော်က ဆန့်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ အဲဒီတုန်းက တိုင်းမှူးက ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးပါ။ ဥပမာ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒဏ်ငွေရိုက်တယ်၊ အဲဒါတွေကို ဖြတ်ပိုင်းမပေးဘူး။ အဲဒါမျိုး ငွေအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေပါ”
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ကို ဘာကြောင့်ဖွဲ့ရလဲ။ စဖွဲ့ချိန်မှာ ပါဝင်ခဲ့ပုံ။
“၈၈ နောက်ပိုင်း ကျောင်းသားတွေ အကုန်လုံး ပါလာနိုင်အောင်၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို အာမခံချက်ရှိဖို့၊ အကြောက်တရားတွေ ပယ်ဖျောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပါ။ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးဆိုပြီး မရှိပါဘူး။ အလျားလိုက် ဖွဲ့စည်းပုံပေါ့ အကိုရာ။ ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုတော့ ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ ထားပြီးတော့ ကျန်တာကတော့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။ အစက ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုပြုံးချိုတို့ သူတို့ အဓိက ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှ ကျနော်တို့ အငယ်တွေ ပါဝင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်”
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့နဲ့အတူ လှုပ်ရှားနေတုန်း ဘယ်လို ဖမ်းခံရတာလဲ။
“အဲဒီဟာမှာ ပါလာပြီး နောက်ပိုင်းကျတော့ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ ဆိုပြီး ဖွဲ့စည်းပါတယ်။ အဲဒီမှာ တိုင်းရင်းသားကိစ္စတွေကို ပိုပြီးအာရုံစိုက်ဖို့အတွက် လိုအပ်လာတယ်လို့ ထင်တဲ့အတွက် တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့မှာ ကျနော် ပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တော့ လောင်ဆာဆီဈေးတက်ပြီးတော့ ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေးတွေ ဘာတွေနဲ့ ဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ ကျနော်တို့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကို နအဖ က လိုက်ဖမ်းတဲ့အတွက် ရှောင်တဲ့လူကရှောင်၊ ဖမ်းခံရသူကဖမ်းခံရ ဖြစ်လာပါတယ်”
တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာ ဘယ်သူတွေ ပါတာလဲခင်ဗျ။
“ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ၁၉၉၀ အနိုင်ရ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက nominate လုပ်ထားတဲ့ လူငယ်တွေ၊ နောက် တခြားတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေ ပါဝင်ကြပါတယ်။ UNA တို့ UNLD တို့မှာ ပါတဲ့ ပါတီတွေကို ပြောတာပါ”
ကိုတင်ထူးအောင်က ၂၀၀၇ မှာ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ပူးပေါင်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ အဓိကပါဝင်ခဲ့တဲ့ သဘောလား။
“၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ လူထုလှုပ်ရှားမှုကို စနစ်တကျဖြစ်အောင် ဆိုပြီးတော့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ၊ တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေ၊ သံဃာတော်တွေ၊ အနုပညာရှင်တွေ ပူးပေါင်းပြီး ဖွဲ့လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်”
“ကျနော်က မူဝါဒနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးတာဝန်ခံ တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုကျော်စိုးက မူဝါဒနဲ့ နိုင်ငံရေး တာဝန်ခံပါ။ ကိုကျော်ဝင်းချေနဲ့ မောင်သန်းရွှေ ကျတော့ သီးသန့်တာဝန်မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ကို ကူတာပါ။ အခု အစည်းအဝေးထိုင်ဖို့က ကျနော်တို့ မရသေးပါဘူး။ ကိုစိုင်းမင်းလွင်တို့နဲ့ တွေ့ပြီးပါပြီ။ ကိုကျော်စိုးနဲ့ ဒီနေ့တွေ့ဖို့ ချိန်းထားပါတယ်။ ကိုစိုင်းမင်းလွင်က သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံပါ။ သူက ဦးရွှေအုန်းတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါလာတာပါ။ သူက ရှောင်တိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် အဖမ်းမခံလိုက်ရပါဘူး”
၂၀၀၇ ခု ဆန္ဒပြတာမှာ ပါခဲ့လို့ ဖမ်းခံရတာက ဘယ်တုန်းကလဲ။
“သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ည ည ၁၁ နာရီခွဲလောက်မှာ ကျနော့်အိမ်ကို လာဖမ်းပါတယ်။ ပူးပေါင်းအဖွဲ့လို့တော့ သူတို့က ပြောတာပဲ။ အက်စ်ဘီ၊ ရယက၊ စွမ်းအားရှင်တွေရော အများကြီး ပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကျနော်ရယ်၊ မစန္ဒာမင်း၊ ကိုကြီးသန်းရယ်၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုလှမျိုးနောင်။ တချိန်ထဲမှာ ကျနော်တို့ အိမ်တွေကို ဝိုင်းတဲ့သဘောပါ။ ကျနော့်အိမ်က တံခါးနှစ်ထပ်ရှိတဲ့အတွက် ပထမ တထပ်ကို ဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်က မသင်္ကာတဲ့အတွက် နောက်ဖေးပေါက်က ရှောင်သွားတာပါ”
“၂၀၀၇ ခု အောက်တိုဘာလကုန်လောက်မှာ မြေနီကုန်း ဒဂုံစင်တာရှေ့မှာ ဖမ်းခံရတာပါ။ သူတို့က ကျနော့်သူငယ်ချင်းတယောက်ကို ဖမ်းထားပြီးတော့မှ ကျနော့်ကို ခေါ်ခိုင်းတဲ့ သဘောပါ”
ဖမ်းခံရပြီးတော့ ဘယ်ကို ရောက်သွားလဲ။
“ကျနော့်ကို ရန်ကုန် ထောက်လှမ်ရေး-၂ မှာ တရက်ထားပြီးတော့မှ အင်းစိန်ထောင်ကို ပို့ပါတယ်။ ပို့ပြီးတော့ အဲဒီမှာပဲ စစ်ကြောရေး လုပ်ပါတယ်။ စစ်ကြောရေးလုပ်ပြီး ရုံးမတင် အမှုမဖွင့်ပဲ အင်းစိန် ထောင်မှာ တိုက်ပိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော် ကျနော်တို့တွေကို တနှစ်ကျော်လောက် ထားပြီးမှ ရုံးထုတ် အမိန့်ချတာ ဖြစ်ပါတယ်။”
“စစ်ကြောရေးမှာ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေရယ်၊ တိုင်းရင်းသားလူငယ်ထဲက ကိုကျော်စိုးတို့၊ နောက် ကျနော်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပါလာတဲ့သူ တချို့နဲ့အတူ အစစ်ခံခဲ့ရတာပါ။ ညဖက် ပေးမအိပ်ဘဲနဲ့ တောက်လျှောက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညှဉ်းဆဲမှု လုပ်ပြီးတော့ စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ရိုက်နှက်တာတော့ မရှိပါဘူးခင်ဗျ”
စီရင်ချက်ချတော့ တတွဲထဲ ဘယ်သူတွေပါလဲ။
“ကျနော်ရယ် ကိုကျော်စိုး ခေါ် ကိုကန်လန်ခုပ်ရယ်၊ ကိုကတ်ခန်ခွာ (ဇိုမီး)၊ ကိုကျော်ဝင်းချေ (ရခိုင်)၊ မောင်သန်းရွှေ (ရခိုင်) ငါးယောက် အမှုတွဲကို ပေါင်းပြီးတော့ ချခဲ့တာပါ။ မောင်သန်းရွှေကတော့ ခုထိ မလွတ်သေးပါဘူး သာယာဝတီထောင်မှာ။ အဲဒါက ကျနော့်ကို တိုင်းရင်းသားလူငယ်နဲ့ စက်တင်ဘာလူထုလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆွဲလိုက်တဲ့အမှုတတွဲပါ။ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများနဲ့ တတွဲက ဆက်တိုက် ရုံးတက်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ ကိုကျော်စိုးက ဦးပူကျင့်ရှင်းထန်ရဲ့ သားပါ”
“ကျနော့်နဲ့ ကိုကျော်စိုးကို ၃၃ နှစ်ပါ။ ကျန်တဲ့သူတွေက ၈ နှစ်တွေ၊ ၁၀ နှစ်တွေပါ။ တချို့ကလည်း အယူခံမဝင်ကြပါဘူး။ ကျနော့်ကို အယူခံ ဝင်လိုက်သေးပါတယ်။ အယူခံမှာ ၁၃ နှစ် လျော့သွားပါတယ်။ အနှစ် ၂၀ ပဲ ကျန်တာပေါ့။ အယူခံနိုင်တဲ့ကိစ္စ ခန္တီးထောင်မှာပဲ သိရတာပါ။ ၂၀၀၉ ခု ဒီဇင်ဘာလလောက်မှာ ခန္တီးထောင်ကို ပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်”
“မောင်သန်းရွှေကလွဲပြီး ကျန်သူတွေ လွတ်ပါပြီ။ မောင်သန်းရွေက ၂ နှစ် လောက်ပဲ ကျန်ပါတော့မယ် ပြောပါတယ်”
ခန္တီးထောင်ထဲမှာ တိုင်းရင်းသားဖြစ်လို့ ခွဲခြားဆက်ဆံတာ ခံရဖူးလား။
“မရှိပါဘူး။ ထောင်ထဲမှာ တခြား ဒေသခံတွေပေါ်မှာတော့ ဖိနှိပ်တာ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညှဉ်းဆဲမှုတွေတော့ မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ထောင်ပိုင် ဦးစောရစ်ချတ် လက်ထက်ကပါ။ ကျနော်တို့ကို ကူညီဖို့အတွက် ကျနော်တို့ တိုက်နားကို ကပ်လာတဲ့ လူတွေ၊ ရေထမ်းတဲ့လူတွေကို ခြေချင်းခတ်တာတို့၊ ဒေါက်ခတ်တာတို့၊ တိုက်ပိတ်တာ၊ လျှော့ရက်ဖြတ်တာတို့ လုပ်တာ ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့နဲ့ အဆက်အသွယ် မလုပ်ရဘူး ဆိုပြီးတော့”
“ကျနော့်ကို ခန္တီးထောင် ၂-တိုက်ထဲမှာ သီးသန့်ထားတာပါ။ အဲဒီမှာ ကျနော်ရယ် MI က ဗိုလ်မှူးချုပ် သန်းထွန်းရယ်၊ ဦးဇော်လ၊ ဝ’ က မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ထောင်ဒဏ် တသက်ကျနေတဲ့ ဦးအိုက်စံရယ်။ တယောက်တခန်းစီပါ”
ခန္တီးထောင်မှာ ရာသီဥတု အခြေအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ပြောပြပါ။
“ရာသီဥတု အေးပါတယ်။ ရာသီဥတုကြမ်းတမ်းပြီး ငှက်ဖျားလည်း ပေါပါတယ်။ ကျနော်ဆိုရင် စရောက်တုန်းက တနှစ်မှာ ရှစ်ကြိမ်လောက် ငှက်ဖျားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကို သူတို့ ICRC က ပေးထားတဲ့ ဆေးဝါးတွေနဲ့ ကုသပေးပါတယ်။ အဓိက ခန္တီးထောင်မှာ အခက်ခဲကတော့ သန့်ရှင်းတဲ့ မိလ္လာစနစ် မရှိပါဘူး။ စိတ်ချရတဲ့ သောက်သုံးရေစနစ်လည်း မရှိပါဘူး။ အဲဒီနှစ်ခုက လက်ရှိအချိန်ထိ အခက်ခဲပါ။ နောက် ဆေးဝါးမလုံလောက်မှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်”
ထောင်ဝင်စာ လာတွေ့ခွင့်ရလား။ တွေ့ခွင့်ရင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ရလား။ စာဖတ်ခွင့်။
“ထောင်ဝင်စာ လာတွေ့တာတော့ သူတို့ ဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ တခါတွေ့ရင် မိနစ် ၂၀ လောက်ပဲ တွေ့ရပါတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် မဟုတ်ပါဘူး။ ထောင်ဝင်စာ လိုက်မှတ်တယ်။ အက်စ်ဘီတွေက လာကြည့်တယ်။ လာမကြည့်ရင်လည်း အသံဖမ်းတဲ့ MP3 တို့ MP4 တို့ကို အနားမှာ လာချထားတယ်။ အိမ်ကပို့တဲ့ စာအုပ်တွေ၊ ခန္တီးမြို့ပေါ်က မှာတဲ့ ဂျာနယ်တွေ ဖတ်ခွင့်ရပါတယ်”
အခု ထောင်က ထွက်လာပြီဆိုတော့ ဘာတွေ လုပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားလဲ။
“ကျနော်တို့ရဲ့ မဟာဗျူဟာ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ နည်းဗျူဟာဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်မှာ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ ခုချိန်မှာ ဒီလောက်ပဲ ပြောနိုင်သေးပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေးအဖွဲ့ကို ပိုပြီးတော့ စနစ်ကျအောင်၊ ပိုပြီးတော့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အောင် အဲဒါတွေပါ”
ရခိုင်ဆိုရင် ဦးအေးသာအောင်တို့ ALD ရှိတယ်။ နောက် RNDP ရှိတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ ဘယ်လို ဆက်စပ်မလဲ။
“ကျနော်က ရခိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့က ပါတီတွေကို ရွေးကောက်ပွဲသွားမယ်ဆိုလည်း အကွဲကွဲအပြားပြား မဖြစ်ဘဲနဲ့ ပါတီတခုထဲ စုစည်းပြီးတော့ ဖြစ်ချင်တဲ့ သဘောပဲ ကျနော့်မှာ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေတော့ ရခိုင်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းရမှာပဲ”
“UNDP ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ချင်းနဲ့ ရခိုင်ဟာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုဟာ အောက်ဆုံးမှာ ရောက်နေပါတယ်။ အဲဒီတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အလုပ်ကိုင်ရရှိဖို့အတွက်ရယ်၊ ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးဖို့ capacity building လုပ်ဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။ မီးရရှိရေးကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်က ထွက်တဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွေ၊ သယံဇာတတွေကိုတော့ ရခိုင်ပြည်သူတွေ စီမံခန့်ခွဲ ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ မြင်ပါတယ်”
မြန်မာနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံး အဓိက ဘာတွေ လိုအပ်နေတယ်လို့ ယူဆလဲ။
“နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လိုလားတာကတော့ ဘယ်လို အစိုးရမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့ရဲ့ ဘဝနဲ့ အနာဂတ်ကံကြမ္မာကို ကျနော်တို့ ရရှိထားတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင် စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုမျိုးကို ကျနော်တို့ လိုချင်တာပါ။ ဒီလိုဟာမျိုးသာလျင် မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒ အခြေမပြုဘဲ နိုင်ငံရေး တရားမျှမှု ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့တနေ့မှာလည်း ရှမ်း၊ ကယား၊ ကရင် စတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ယမ်းငွေ့တွေ ဆိတ်သုဉ်းပြီး အိုးစည်နဲ့ ဖားစည်သံတွေ ဝေလာဖို့ ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်”
အစိုးရကလည်း အခု ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေလုပ်နေတယ်။ NLD နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်တော့မယ် အဲဒီအပေါ်မှာ ဘာပြောချင်လဲ။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မဝင် ကျနော်တို့ သဘောထားမှတ်ချက် ပေးစရာအကြောင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တိုင်းရင်းသား ဖြစ်တည်မှု၊ ကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီးခွင့်၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဗမာ ခေါင်းဆောင်တွေ အများကြီး သင်ယူရမှာဖြစ်သလို၊ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဘဝနဲ့ အနာဂတ် ကံကြမ္မာကို ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးကြရမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်”
“နောက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ရှေ့လာမယ့် ခရီးလမ်းတလျှောက်မှာ လက်ရှိအစိုးရနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီက နိုင်ငံရေးအရ ရိုးသားတည်ကြည်မှုနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ယုံကြည်စိတ်ချမှုကို စိတ်အားထက်သန်စွာ မျှော်လင့်နေတယ်လို့ပဲ ကျနော် ပြောပါရစေခင်ဗျ။”
အခု လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာပြောချင်လဲ။
“ကျနော်တို့ ပြန်လွတ်လာအောင် လှုပ်ရှားရုန်းကန်ပေးကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ၊ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတရပ်လုံး၊ ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အားပေးထောက်ခံကြတဲ့ မိတ်ဆွေနိုင်ငံများအားလုံး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့အပြောင်းအလဲအတွက် ဆောင်ရွက်နေသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောလိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ လွတ်တာမလွတ်တာထက် တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်း ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးက ပိုပြီးအခရာကျပါတယ်”
“လက်ရှိအစိုးရကို ကျနော်ပြောလိုတာက စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို လိုလားတယ်ဆိုရင် General Amnesty အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေကြားမှာ ပျောက်ဆုံးခဲ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ယုံကြည်မှု၊ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံတန်ဘိုး လေးစားလိုက်နာမှုတွေကို ပြန်လည်ရ ယူဖို့ ကျနော်တို့တွေ အားလုံး ဝိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်းကြရအောင်လို့ ပြောပါရစေ”
Posted by ngs at 00:51
မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ရှင်သန်ရေးတို့အတွက် ရည်စူး၍ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ ရွှေတိဂုံဘုရားတွင် ဆီမီးပူဇော်
(Photo - Yangon Media Group)
Posted by ngs at 07:18
photo - messenger journal/facebook
စာအမှတ် - ၁/၂ဝ၁၂ (၈၈)
၂၁ - ဇန်နဝါရီ -၂ဝ၁၂
၁။ကျွန်ုပ်တို့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများသည် ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးမှ စတင်၍ အစဉ်တစိုက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြသူများ ဖြစ်သည်။
၂။ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံသားများသည် စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးမူဝါဒအမှားများ ဒီမိုကရေစီ ဆိတ်သုန်းမှုများကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနိမ့်ကျမှုစသည့် လူမှုဒုက္ခ အ၀၀ကို ဆယ်စုနှစ်ငါးခုကျော် ခံစားခဲ့ကြရပြီးဖြစ်သည်။
၃။ ယနေ့အချိန်အထိ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ဦးတည် ကြိုးပမ်းကြရမည့် အချိန်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်သည်။
၄။ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးအတွက် လာမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အား ထောက်ခံသည်။ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအနေဖြင့် အားပေး ၀န်းရံသွားမည်။
၅။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဖြစ်စဉ်များမှတစ်ဆင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြည့်စုံသော ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြစ်ပေါ်စေရန် အမျိုးသားအင်အားစုအားလုံးနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမည်။
၆။ နိုင်ငံတော်သစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များအား ပြန်လည် စုစည်းနိုင်ရန်၊ နိုင်ငံရေးအရ ထိန်းသိမ်းခံထားရသည့် ကျန်ရှိနေသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံး ပြန်လည်လွှတ်ပေးရေး၊ နိုင်ငံရေးအရ တိုင်းပြည်မှ ထွက်ခွာခဲ့ရသော ပြည်ပရောက်နိုင်ငံရေး အင်အားစုများ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ပြန်လာနိုင်ရေးတို့အတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးပါရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ အလေးအနက် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
၇။ အမျိုးသားစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် နိုင်ငံတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာ မြင့်မားလာစေရေးအတွက် နိုင်ငံတကာနှုန်းစံများနှင့်အညီ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုများ၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာမိသားစုများနှင့် ဆက်ဆံရေး တိုးမြင့်လာစေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများအား အားပေးထောက်ခံသွားမည်။
၈။ ဒီမိုကရေစီအရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဆောင်သည့် အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ တပ်မတော်အင်အားစု၊ နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီး၊ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများအပါအ၀င် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့စည်းတစ်ရပ်လုံးရှိ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အင်အားစုများနှင့် ကိုယ်စွမ်း ဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်။
၉။ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးကြိုးပမ်းမှုများတွင် အားပေးကူညီထောက်ခံနေသော ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ နိုင်ငံတကာမိသားစုများနှင့် လက်ရှိပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ယုံကြည်ထက်သန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နေသူအားလုံးအား ကျွန်ုပ်တို့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများမှ အလေးအနက် တန်ဖိုးထားအပ်ပါသည်။
Posted by ngs at 05:11
The Last Night in the Cell
By KYAW ZWA MOE Saturday, January 21, 2012
It was Jan. 12, the night before they were freed.
Pyone Cho,aleading member of the 88 Generation Students group detained in the remote Kawthaung Prison in southern Burma's Tenasserim Division, was immersed inaweekly journal whenaprison guard he hadn't noticed standing in front of his cell asked him what he was reading.
Then the guard, speaking to him through the iron bars of Cell No. 6, told him the news: “You will be freed tomorrow.”
Pyone Cho wasn’t convinced. Coincidentally, the 46-year-old former student leader was reading about the “clemency” ordered by President Thein Sein on Jan. 3, just nine days earlier, which saw the release of around 30 political prisoners among more than 6,000 criminal convicts.
Pyone Cho, center,aleading activist of the 88 Generation Students Group, waves at his colleagues welcoming his arrival at Yangon airport after released from Kawthaung Prison in Tenasserim Division on Jan. 13. 2012. (PHOTO: Associated Press)
Under the clemency, his original 65-year sentence was reduced to around 30 years. It seemed unlikely that another amnesty would be ordered again so soon.
But when the guard added that the prison had already booked his flight back to Rangoon, he started to doubt his assumption. Before he could say anything in reply, however, the guard disappeared without another word.
Suddenly alone with his thoughts, he began to wonder if the new amnesty, if it was for real, would apply to other members of the 88 Generation Students group. Almost all of them were serving sentences similar to his own for their role in protests againstadramatic rise in fuel prices in July 2007 that months later sparked the Buddhist monk-led Saffron Revolution, Burma's biggest mass uprising in decades.
Asaveteran of Burma's pro-democracy movement, his first thought was how he and his colleagues could continue the struggle they began in 1988, when nationwide demonstrations toppledamilitary-backed socialist regime, only to be crushed byanew and even more brutal junta. He had already spent 15 years behind bars for his leading role in those protests; combined with the years he had served since his second jail term began in 2007, he had spent nearly half his life in prison for his political activities.
Still finding it difficult to believe that he would be released again so soon, but with his mind already racing ahead with ideas about how he and his fellow activists could accelerate the reforms begun by Thein Sein so that Burma could finally catch up with the rest of the region, he found it impossible to sleep. One issue that loomed large in his mind that night was Burma's ethnic conflicts, which he saw as the most important problem facing the country.
Over the past four years, Pyone Cho had spent much of his time reading. He read Nelson Mandela's “Long Walk to Freedom,” biographies of US President Barack Obama and former Chinese President Jiang Zemin, and novels. But the reading material he dedicated most of his time to was Burma's 2008 Constitution, drafted byacommittee dominated by delegates handpicked by the former junta.
Another pastime was painting, an activity normally prohibited in Burma's prisons, but which he had somehow managed to convince the prison authorities to allow him to do. In four years, he finished around 20 paintings—mostly imagined landscapes, but alsoafew depicting the prison and his cell.
His mind still very active after so many years in prison, Pyone Cho spent his final night in prison thinking about the future. At the same time, he thought of his brother, Thet Win Aung, who he knew would never see freedom again. Alsoapolitical activist, Thet Win Aung died in 2006 while servingalengthy sentence.
With such thoughts crowding into his mind, he resigned himself toasleepless night and the uncertainty of the day that lie ahead.
That same night, but hundreds of miles away in another remote corner of Burma, Ant Bwe Kyaw sat in his cell in Katha Prison in Sagaing Division. Political colleagues since 1988, he and Pyone Cho were arrested together in 2007. Both men were 46 years old, and both had spent much of their lives behind bars.
Ant Bwe Kyaw's cell was one of just three in his cell block. His neighbors wereaformer lieutenant-colonel in Burma's infamous military intelligence service and an IT guy imprisoned for helping an activist group.
Nearby wasaward for female prisoners, including Hla Hla Win,ayoung reporter who was servingalengthy sentence for sending information to the Democratic Voice of Burma.
Ant Bwe Kyaw,aleading activist of the 88 Generation Students group
Shortly before 8 pm on Jan. 12, Ant Bwe Kyaw heard the sound of hands clapping from the women's ward. Moments later, he heard Hla Hla Win shouting out his name. Although he could barely see her face from his cell, he could easily imagine the excitement it expressed. “I think this is our time,” she shouted. “They just announced on TV that 651 prisoners are going to be released tomorrow.”
Unlike the female prisoners, who were allowed to watch TV forashort time in the evenings, Ant Bwe Kyaw had to wait until 8 o'clock to hear the announcement with his own ears. At that time every evening, the prison played the national news over the radio for all inmates to hear. The announcement said that the 651 prisoners would be released “for national reconciliation.” This phrase made him feel almost certain that he and other political prisoners would be released the next day. His first thought was that it would be very good to reunite with his 88 Generation colleagues.
Normally at this time of night, he would spend some time reading before meditating for about half an hour and then going to bed. But on this night, he was too excited to read as usual, so he made himselfastrong cup of instant coffee and started thinking about the books he would take with him when he was released.
He decided that he would donate most of his Burmese books to the prison library and fellow prisoners but keepafew books on philosophy and some novels in English, including “Norwegian Wood” and “Kafka on the Shore” by the Japanese writer Haruki Murakami, whose books he enjoyed for their unusual descriptions.
Another favorite book was “Dreams from My Father,” by US President Barack Obama, which containedasentence that he found so striking that he wrote it down in his notebook: “What I do know is that history returned that day withavengeance; that, in fact, as Faulkner reminds us, the past is never dead and buried—it isn’t even past.”
Afteralong, cold and almost sleepless night, Ant Bwe Kyaw heardaguard approach his cell at around4am. Getting as close to the cell door as possible and speaking inawhisper, the guard said: “The list has just arrived. You're on it. But your neighbors are not.”
Even then, Ant Bwe Kyaw could hardly believe that he was about to be freed. Sensing his doubt, the guard just asked if he could have his blanket when he left.
Like Pyone Cho, Ant Bwe Kyaw spent his remaining hours behind bars thinking about how he and his colleagues could resume their political activities. He felt that Thein Sein’s reforms were justastart,adirt track on the way to democracy that needed to be turned intoahighway. It would be up to him and his colleagues to accelerate the process of constructing Burma’s road to freedom.
But even as his own freedom seemed more certain and his dreams of change began to dawn asareal possibility, he could not help but think of those he would soon be leaving behind. He hoped that they and all of Burma’s political prisoners, scattered in prisons around the country, would also soon be able to rejoin the struggle for their country’s freedom.
Ko Ko Gyi, the second most prominent 88 Generation leader after Min Ko Naing, had no idea on the evening of Jan. 12 that his release from Mong Hset Prison in Shan State was imminent. The 50-year-old former student leader believed that the government was facing an internal power struggle and would never allow him and his colleagues to join forces again at suchasensitive time.
He also knew that Burma’s rulers were always very careful to keep the 88 Generation group away from Aung San Suu Kyi. When they were released before, she was under house arrest; and whenever she was freed, they were behind bars. If they and Suu Kyi’s National League for Democracy (NLD) hadachance to work together, they could prove to beaformidable political force. While the NLD dominated Burma’s party politics, the 88 Generation leaders had achieved spectacular results in organizing popular protests that presentedamore direct challenge to the military’s political supremacy.
Like Pyone Cho and Ant Bwe Kyaw, Ko Ko Gyi had spent about 15 years in prison after the 1988 uprising, before being sentenced to another 65 years after the Saffron Revolution.
Also like them, he was tireless in his efforts to find solutions to Burma’s political problems, which had left the country divided and impoverished.
Ko Ko Gyi, center right,aleading activist of the 88 Generation Students Group, waves his hand to his colleagues as he arrives at Rangoon airport after released from Mong Hset Prison, Shan State, on Jan. 13, 2012. (PHOTO: Associated Press
Another thing all three had in common was their keen interest in reading. Ko Ko Gyi had also read Obama’s books, “The Audacity of Hope” and “Dreams of My Father,” and felt they contained valuable lessons. “Obama is practical,” said Ko Ko Gyi, whose respect for pragmatism had deepened after years of pursuing political ideals.
He said that when he was younger, he was impressed by Cuban leader Fidel Castro and his fellow revolutionaries, who started out with just 12 rifles. Now, however, he felt that Burma needed more than just young idealists ready to give their lives to the struggle. “If only revolutionaries governacountry, the country will be in trouble.”
That’s why he said he welcomed Suu Kyi’s decision to work together with the government formed last year, even if its democratic credentials leftagreat deal to be desired. Sometimes, he said, it is easier to risk being thrown in jail than to make risky political decisions that not everybody supports.
Ko Ko Gyi had no illusions about what “power sharing” with the current government would mean. Instead ofa50-50 arrangement, the military would insist on retaining 70 or 80 percent of its former monopoly on power. But at this stage, it didn’t matter so much who was the biggest winner in this “win-win” deal: The important thing was to recognize that there were more than just two players, and that all stakeholders should benefit from any agreements reached.
So what role did he see for himself and other activists? Essentially, he said, they were “catalysts,” agents of reform who could bring credibility to the political transition process and help keep it on the right track.
But they alone would not be able to get the country get back on its feet. “During the transition period, we need Burmese technocrats, including those who were educated in foreign countries. They need skills, goodwill and passion to contribute to the country. They don't need any experience like us in jail.”
Did he really believe that the country was finally beginningagenuine process of reform? Or did he fear, like so many others, that the current situation could easily reverse itself, undoing the progress of the past year?
“We can never be certain what tomorrow will bring,” said Ko Ko Gyi. “All we can do is work together to make tomorrowabetter day than today.”
The following day, all three men were freed along other members of the 88 Generation Students group being held in prisons around the country. Crowds of their supporters gathered to hear what they had to say as they made their way back to Rangoon. Min Ko Naing, who was released from Thayet Prison in Magway Division, delivered speeches that were received with rousing cheers. They were given garlands of flowers like returning war heroes, but in their own minds they were returning to the battlefield—the subtle, treacherous and exhilarating battlefield ofanew era in Burmese politics.
Posted by ngs at 05:03
Peace Efforts Persist, ButaNationwide Ceasefire ...
Dear friends, We, 88 New Generation Students (U...
“နိုင်ငံရေးအရ ယုံကြည်စိတ်ချမှုကို စိတ်အားထက်သန်စွာ ...
မလွတ်မြောက်လာသေးတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား စာရင်းပြု...
Burma's Remaining Jailed Dissidents
လွတ်မြောက်လာတဲ့ သူတို့ရဲ့ အသံ
“နိုင်ငံသား တယောက်ချင်းစီဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ မပတ်သက်လ...
“ဘယ်လို Feeling မှ မဖြစ်ပါဘူး။ ဝမ်းလည်း မသာပါဘူး”
Min Ko Naing Calls for Peace in Ethnic Areas
Political Dissidents Released in Govt Amnesty
ယုံကြည်ရာကို ခွန်အားအဖြစ် ပြောင်းပြီး နေ့ရက်တွေကို...
အခြေခံအခွင့်အရေး အတွက် ဆန္ဒပြသူ ထိန်းသိမ်းခံရ
Britain balancing hope and scepticism in Burma
Suu Kyi Reassures 88 Generation Families
EU Sanctions Remain Until Burmese Prisoner Release...
Food shortage threatens Kachin refugees
UK ‘watching the mood on the streets’ of Burma
NLD Registration Approved; Campaign to Start Soon
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ဗြိတိန်ဝန်...
Foreign Minister Hague to push for reforms
Invitation to the protest to call for the immediat...
အကျဉ်းသားများအား ‘လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုခြင်း’ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီမိုကရေစီရေး သဘောထားများကို န...
Burmese Troops Overrun Kachin Base